Thailand - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 2)
Nweta akwukwo iji gaa uwa
Nweta akwukwo iji gaa uwa nile ma nwee obi uto ahu.
Chọrọ ilekọta anụ ọhịa na Thailand?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ilekọta anụ ọhịa na Thailand, anyị ga-agwa gị usoro ndị dị mkpa iji bụrụ ndị ọrụ afọ ofufo ma si otú a nyere aka lanarị ụmụ anụmanụ a
Sanlọ Eziokwu nke Pattaya
Anyị na-akụziri gị ihe nzuzo niile nke ụlọ nsọ nke Eziokwu na Pattaya: ọnụ ọgụgụ nke ime ụlọ, mmalite na nkà ihe ọmụma nke ụlọ nsọ a pụrụ iche na ụwa.
Anyị na-achọpụta ebe ndị njem nleta kachasị atụ na Asia, site na ewu ewu na ọnụahịa n'etiti ndị njem. Echefula ya ma ọ bụrụ na ị gaa na Chile.
Ndụ kachasị mma nke nwoke nwere mmasị nwoke na Bangkok
Chọpụta ebe kachasị mma iji nwee ndụ abalị Bangkok na ụlọ mmanya ma ọ bụ klọb obodo.
Thailand, paradaịs nke otu puku amara ga-efu na Eshia
Thailand bu ebe ndi mmadu choro itufu onwe ha na osimiri paradisiacal na ndi choro ichota ala ndi mara nma ...
Oge ezumike na ọdịnala na Thailand
Anyị na-agwa gị gbasara omenala ndị Thailand. Kedu ka ha si ekele onwe ha ma obu oriri ndi ana eme na mba Asia a? Echefula ya n'ihi na ọ ga-adọta uche gị.
Agba nke tagzi Bangkok
Bangis tagzi nwere agba niile, egwurugwu na-aga n'okporo ámá obodo ahụ na-enweghị ezumike
Dragọn ahụ makụrụ ụlọ nsọ nke Wat Samphran, na Thailand
Na ihe niile enwere ike ịhụ na Bangkok obodo mara mma, ọ bụ ihe ziri ezi na ọtụtụ ndị njem na-ahụghị ọtụtụ isi ihe mmasị, ọkachasị ndị anaghị adịkarị na ndị nduzi nke isi obodo Thailand, dịka Templelọ Nsọ nke Wat Samphran na-achọ ịmata ihe. .
Phang Nga, osimiri nrọ na Thailand
Phang Nga, osimiri dị na Thailand
Anụ enyi, nri na-ewu ewu na Thailand
Omume dị egwu: na Thailand anụ enyí na-aghọ nri kpakpando nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ nri ọ bụla na mba ahụ. Ọ dị ka ezi, elephant na-eji ihe niile eme ihe, site na ogwe aka na akụkụ anụ ahụ. Mba, ọ bụghị egwuregwu, ihe megidere ya bụ omume na-eyi egwu ịdị ndụ nke ụdị a.
Ahịa Bangkok na-ese n'elu mmiri
Bangkok na ahịa ya na-ese n'elu mmiri, nke na-agbakwunye na foto ịhụnanya nke ọwa mmiri dị mma nke usoro ihe omimi
Anụ ụtọ Thailand.
Thailand maka ọnọdụ ya, ma China na India gosipụtara ọdịbendị ya. Mkpụrụ nke mmekọrịta a ...
Klọb na Ogwe ndị nwoke kacha mma na Bangkok
Ozugbo ị nwere echiche zuru oke banyere ọnọdụ nwoke nwere mmasị nwoke na Bangkok, ị dịla njikere ikpebi ebe ...
Ka esi aga Krabi? Zọ ụgbọ elu na ala
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịga njem na Krabi ma ị maghị otu esi eme ya, ebe a anyị nyere gị ụzọ dị iche iche, ka ...
Ezigbo ihe ọ drinkingụ drinkingụ na iri nri Chiang Rai
Dịka ị maraworị, Chiang Rai bụ mpaghara ugwu ugwu nke Thailand, ọ dịkwa ...
Ejiji, ụlọ ahịa akwa na ịzụ ahịa na Thailand
Taa ụwa nke ejiji na Thailand agbanweela ma nwee mmụọ karịa otu onye….
Gaa Bangkok, isi obodo Thailand
N'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia, otu n'ime obodo kachasị amasị m, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kachasị, bụ Bangkok. Oge ọ bụla m gara m maara ...
Ndị Bangkok kacha mma: Ndị uwe Rajawongse
Dika anyi kwurula na ozo (Ime akwa na Asia) otutu ndi njem choro ime uwe ma obu uwe elu ...
Mmiri mmiri na Koh Phi-Phi, Thailand
Otu n'ime ihe kachasị amasị anyị banyere Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia bụ na ọ dị mfe ijikọta n'otu njem ...